ShweMinThar: နံရိုးပေါင်းဆီချက်ခေါက်ဆွဲ -မြေအိုးကြက်ဆီထမင်း
• ကြက်သွန်နီ - ၂၀ ဂရမ်
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၃၅ ဂရမ်
• ငရုတ်ကောင်းစေ့ - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• နွယ်ချို - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ရေနွေးဆူဆူ - ၂ လီတာ (ဝက်နံရိုးပြုတ်ရန်)
• ရေနွေး - ၅ဝဝ မီလီလီတာ
• ခေါက်ဆွဲ - ၆ဝဝ ဂရမ်
• ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း - ၃ဝဝ ဂရမ်
• ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁။ ဒယ်အိုးထဲ ချင်း၊ ကရဝေးရွက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့နှင့် နွယ်ချို တို့ကို မီးအေးအေးနဲ့ လှော်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေနွေးဆူဆူလောင်းထည့်ပါ။ ဆား၊ ပဲငံပြာရည် အကြည် စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်းနှင့် ဝက်နံရိုးတို့ကို ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ။ ရေဆူလာလျှင် အမြှုပ်များကို ခပ်ထုတ်ပစ်ပါ။ ၄၅ မိနစ်ခန့် တည်ပါ။ ဝက်နံရိုးပြုတ်ရည် ရလာလျှင် ပြုတ်ရည်ကို ဇလုံထဲ စစ်ထည့်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဝက်နံရိုးပြုတ်ရည်တစ်ဝက်ကို ရေနွေး ၅ဝဝ မီလီလီတာ ထည့်ပြီး တည်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ဆူအောင်တည်ပါ။ ပြီးလျှင် ခေါက်ဆွဲထည့်ပြုတ်ပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ခေါက်ဆွဲကို ဆန်ခါထဲ ဆယ်ထည့်ထားပါ။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရည်နဲ့ ထိုင်ဝမ် မုန်ညင်းကို ပြုတ်ပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်ထဲ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ဝက်နံရိုး ပြုတ်ရည် အနည်းငယ်နှင့် ပြုတ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲတို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင် နယ်ပါ။ နှံ့စပ်သွားပြီဆိုလျှင် ပြုတ်ထားတဲ့ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း၊ ဝက်နံရိုး၊ ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် ငရုတ် ကောင်းမှုန့်တို့ကို ထည့်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 4:15 AM
ပဋိညာဉ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
🎁 ကျန်းမာသက်ရှည်ရန် သိကောင်းစရာ TDEE အကြောင်း 🎁
Human Resource Succession Planning
ဂွေးတောက်ရွက် ကြက်တောင်ပံဟင်းချို -ကျောက်ပွင့်အစပ်...
သူတို့ တွေက ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားကြ သလဲ ?
"Know - Do gap ​တွေ ကျဉ်း​စေဖို့"
ထိုင်းဆန်ပြားကြော် - ယိုးဒယားကြက်ကောင်လုံးကင် - မ...
လူကြိုက်နတ်ကြိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (အပိုင်း ...
တစ်သက်လုံး Comfort Zone ထဲမှာ နေမှာလား❗
Capernaum သို့မဟုတ် တွေးစရာတွေ အများကြီးပေးတဲ့ ရု...